Kuqokwe abadansi abavelele kwi-ballroom | News24
Kuqokwe abadansi abavelele kwi-ballroom
Abadle umhlanganiso esigabeni sabadala (kusuka kwesokunxele) Brian Booth kanye no Londeka Mngadi abaphume endaweni yokuqala, Boniswa Gazu kanye noMfundo Khoza abalale isibili.ISITHOMBE : sithunyelwe
KUQOKWE abadansi abavelele be-Ballroom kanye ne-Latin Dance e-Durban University of Technology esigcemeni esiseNdumiso eMbali Unit 1 ngoMgqibelo mhla ziyi-16 kuNhlangulana (June).
Lokhu kwenziwe njengengxenye yomncintiswano yomdanso yaminyaka yonke obizwa ngokuthi Umgungundlovu Youth Championship.
Inhloso yalo mncintiswano ukufundisa intsha eyahlukene umdanso we-Latin kanye ne-Ballroom nokuyimidanso engajwayelekile kakhulu ikakhulukazi ezindaweni zasemalokishini.
UNks Palesa Rabelemana ongumxhumanisi kwi-Ballroom Dance esifundazweni saKwaZulu-Natal uthe bajabule kakhulu ngomphumela walo mcimbi.
“Into esijabulisa kakhulu ukuthi intsha ibiphume ngobuningi bayo futhi ibona abantu ebesibabhekile kakhulu ukuba bafike. Sithole ngisho ukwesekwa kubantu bangaphandle nokuyinto esijabulisa kakhulu leyo.
“Sifuna ukukhulisa lolu hlobo lomdanso lapha eMgungundlovu. Njengoba sazi ukuthi imidlalo yama-Salga izobe iseMgungundlovu kulo nyaka siyafisa ukuthi kuphela inyanga kaNtulikazi (July) sibe sesineqembu lale midanso eliphuma khona lapha eMgungundlovu,” kubeka yena.
Uthe bayayidinga kakhulu intsha ezongenela lo mdanso noma isikole esinomudlandla wokuthi sifunde lo mdanso.
“Siyazi ukuthi likhona vele iqembu elikhona lapha eMgungundlovu kodwa sifuna ukuthi kube noshintsho kungalokhu kuphinda iqembu elilodwa njalo lezingane sifuna kube khona nentsha ekhona kulo mdanso.”
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngokufundela lo mdanso shayela inombolo ethi: 063 522 3564.